Ciidanka PSF-ta Puntland oo diiday in la arko dadka ku jira xabsiyada ay gacanta ku hayaan | Somsoon
Home WARAR Ciidanka PSF-ta Puntland oo diiday in la arko dadka ku jira xabsiyada...
Guddiga xuquuqul insaanka Baarlamanka Puntland ayaa shalay golaha wakiilada Puntland ka hor jeediyay warbixin ay ka soo aruuriyeen deegaanada maamulka, taas oo taabanaysa meelo badan.
Guddiga ayaa warbixintiisa ku soo bandhigay heerka xuquuqul insaanka iyo dembiyadii ka dhacay gudaha Puntland lixdii bilood ee la soo dhaafay.
Warbixinta oo uu akhriyay Xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Sahal, ayaa lagu sheegay in lixdii bilood ee la soo dhaafay ay Puntland ka dhaceen 3387 dembi oo kala duwan, kuwaasi oo ay ku jiraan 56 dembi oo kufsi haween loo geystay ah.
Guddiga ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay, in hey’adaha amniga Puntland ay dadka iska xirtaan, kuwaas oo xabsiyada is kaga jira muddo dheer oo gaareysa bilo ama sanado iyaga oo aan Maxkamad la soo taagin.
Waxaa kale oo ku jiray warbixinta guddiga in ay xabsiyada Puntland ku soo arkeen dad loo haysto shilal gaadiid, kuwaas oo waqtiyo dheer ku jira xabsiyada, qaarkoodna ay ku indha-beeleen sida lagu sheegay warbixinta.
Guddiga ayaa sheegay in ay kormeerro kala duwan ku sameeyeen dhamaan xarumaha maamulka Puntland ee dadka lagu xiro, marka laga reebo hal xarun.
Xarun ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee lagu xiro dadka oo ay maamulaan ciidanka PSF Puntland ayaa lagu sheegay warbixinta in si cad loogu diiday guddiga in kormeer ay ku sameeyaan, si wax looga ogaado dadka halkaasi ku xiran, dembiyada loo heysto iyo xaaladooda.
Article horeSomalia to launch first oil licensing round in December, Reuters
Article socoda Dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga ay iibineyso shatiyada shidaalka dalka